kugashira » Sexy rugby woman t-shirt
Iyo yakagadzirwa inoita mutsauko wese! Kutenda ku polyester yayo nekotoni inosanganiswa, iyi t-shati yehuro yeT-shirt inofadza uye inofadza. Chiedza chakajeka, chichabatanidza nyore nyore nezvose zvekupfeka kwako.
Iko shaki duku. Ndapota fungai chati yekuyera kuti musarudze hukuru hwenyu.
Mavara akafanana nevakadzi nevarume
Chigadziko chakanaka uye chichena: 150 g / m²
Kugadzirwa: 65% polyester, 35% kota
Tsvaga iyi t-shirt yakanaka yebhora pedu mudura redu clicking here
retrouvez également les magnifiques Hooded sweatshirt yevakadzi